Waa maxay Gimp | Hal -abuureyaasha Online
Waxaa ka mid ah barnaamijyada tafatirka sawirka, waxaan shaki ku jirin in kan ugu caansan loo yaqaan Photoshop. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira mid kale oo tartamaya oo xitaa kuwa badani doorbidaan astaanta. Intaa waxaa dheer, waa lacag la'aan waxayna si ficil ahaan ah ula mid tahay kuwa inta badan la isticmaalo. Ma taqaan midkee? Waxay ku saabsan tahay Gimp. Laakiin waa maxay Gimp?
Haddii aad maqashay barnaamijkan tafatirka sawirka laakiin aadan hubin waxa uu yahay, haddii ay ka fiicnaan karto ama la mid noqon karto Photoshop iyo waxa aad ku samayn karto, markaa waxaan ka hadli doonnaa wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Gimp.
1.1 Gimp asal ahaan
2 Faa'iidooyinka iyo khasaaraha isticmaalka Gimp
3 Maxaa loogu talagalay
4 Erayada barnaamijka
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad ka ogaato Gimp waa macnaha eray -bixintiisa. Gaar ahaan, waa barnaamijka maareynta sawirka GNU, ama waxa la mid ah, barnaamijka tafatirka sawirka. Waxaad ku shaqayn kartaa bitmaps iyo sawirro, sawirro, sawirro, iwm.
Sidii aan hore u soo sheegnay, barnaamijku waa bilaash oo waa bilaash, isagoo awood u leh inuu ku rakibo labadaba Windows iyo GNU / Linux iyo Mac OS X.
Marka laga hadlayo xiriirka ay la leedahay Photoshop, waa laba barnaamij oo kala duwan, in kasta oo ay tahay beddel xitaa ka sarreeya barnaamijka loogu isticmaalka badan xagga tafatirka sawirka. Hadda, horumarkeedu kuma salaysnayn Photoshop, is -dhexgalkiisuna isku mid ma aha.
Kuwii isku dayay waxay yiraahdaan way ka adag tahay oo way adag tahay in lala shaqeeyo, gaar ahaan haddii lagugu bartay Photoshop. Laakiin markaad ogaato sida loo maareeyo, natiijooyin wanaagsan ayaa lagu gaari karaa.
Gimp asal ahaan
Gimp wuxuu ku dhashay Spencer Kimball iyo Peter Mattis 1995. Iyaga, waxay ahayd jimicsi semester ah oo ay ahayd inay ku soo bandhigaan naadiga kombiyuutarka ardayga ee UC Berkeley. Si kastaba ha ahaatee, waxay ahayd mid hal -abuur leh oo soo jiidatay indhaha dad badan.
Waxyaabaha xiisaha leh ee aan dad badani ogeyn ayaa ah in magaca asalka ah ee Gimp uusan ku jirin magaca hadda lagu yaqaan. Si kale haddii loo dhigo, markii ay dhalatay waxay ahayd «Barnaamijka Maaraynta Sawirka Guud». Si kastaba ha ahaatee, sannadkii 1997kii ayaa loo beddelay "Barnaamijka Maaraynta Sawirka GNU".
Arrin kale oo xiise leh ayaa ah in astaanta barnaamijku leeyahay, oo u eg yey ama eey, uu leeyahay magac. Kani waa Wilber, mascot -ka rasmiga ah ee Gimp oo la abuuray 1997 Tuomas Kuosmanen (tigert). Xaqiiqdii, waxaad ku arki kartaa sawirro badan goobta Goobta Qalabka Dhismaha ee Wilber, oo ku jirta koodhka isha Gimp. Haa, mascot -kaas waxaa loogu talagalay in la adeegsado barnaamijka, ma noqon doono mid ka yaraada.
Faa'iidooyinka iyo khasaaraha isticmaalka Gimp
Qalabka tafatirka sawirku waa mid ka mid ah kuwa la tartamaya barnaamijyada kale. Sidaa darteed, shaki kuma jiro inay leedahay faa'iidooyin dhowr ah oo ay u taagan tahay. Si kastaba ha ahaatee, waxa kale oo ay leedahay khasaare
Uma baahnid inaad ku rakibto kombuyuutarkaaga, laakiin waxaad barnaamijka ku haysan kartaa galka maxalliga ah, diskka dibedda ama daruuraha internetka.
Tilmaamo tayo sare leh ayaa loo heli karaa lakabyada iyo waddooyinka.
Tirtir asalka sawirrada dhowr tallaabo oo kaliya.
Aad bay uga dhakhso badan tahay Photoshop.
In kasta oo ay jiraan waxyaalahaas wanaagsan oo dhan, haddana waxay leedahay waxoogaa khasaare ah kuwaas oo ah:
Aan awoodin inaad la shaqayso RBG in ka badan 8 xabbadood, cawlan ama sawirro tilmaaman. Inkastoo iyada oo loo marayo gudbinta dhibka qayb ahaan lagu xalin karo.
Waxay leedahay xadeyn ka badan tan Photoshop, iyo marka aad marar badan la shaqeyso sawirrada waxay muujineysaa. Sidoo kale, haddii ay tahay inaad tafatirto sawirrada ay ku jiraan lakabyo badan, waxaad la kulmi kartaa dhibaatooyin aad u yar.
Way adag tahay in la isticmaalo, gaar ahaan bilowga. In kasta oo aad adeegsan karto casharrada laga helo YouTube -ka.
Hadda oo aad wax yar ka ogaato Gimp, waxaad u badan tahay inaad yeelan doonto fikrad ah waxa loogu talagalay.
Guud ahaan, Gimp waxaa loo isticmaalaa in lagu shaqeeyo sawirrada iyo maadaama ay tahay aalad lacag la’aan ah oo furan oo loo adeegsan karo farsamooyin badan, kuwo badan ayaa doorta inay rakibaan.
Haddii aan barnaamijka si hoose u sii galno, waxaad ogaan doontaa inuu akhriyo oo qoro qaabab sawirro kala duwan sida jpg, gif, png, tiff ... oo xitaa uu akhriyo Photoshop. Hadda qaabka kaydinta u gaarka ahi waa Xcf. Waxa kale oo aad soo dhoofsan kartaa Pdf iyo faylasha Svg (sawirrada vector).
Waxay leedahay dhowr qalab oo aad ka heli karto Photoshop sida lakabyada, kanaalada, burushyada noocyada kala duwan, iwm. Tan waa inaad ku dartaa aaladaha xulashada, maqasyo caqli badan, aalado rinjiyeyn, si aad wax uga beddesho miisaanka, u janjeerto, u leexiso ama u dhegto ... Waxay leedahay qalabyo kale iyo / ama shaandheeyeyaal si loo maareeyo midabada iyo sidoo kale sawirka iyo menu leh saamayn iyo sawir daaweynta.
Si kale haddii loo dhigo, waxaad haysataa aalad aad ka abuuri karto meel xoqan ama wax ka beddeli karto sawir kasta oo aad u baahan tahay sida aad ugu samayn lahayd barnaamij kale oo tafatirka sawirka ah.
Markaad kaydinayso, sida caadiga ah waxay ku samayn doontaa qaabkeeda, laakiin dhoofinta sawirka ayaa kuu oggolaan doonta inaad doorato qaabka aad u baahan tahay.
Ka sokow Gimp, barnaamijku wuxuu ku guulaystay inuu helo dhowr kala -sooc oo in badan ama ka yar la yaqaan. Gaar ahaan, waxaad leedahay
GimpShop. Waa is -dhexgal kuu oggolaanaya inaad dhejisid oo aad Gimp ka dhigto sida Photoshop oo kale. Qaabkaas, kuwa u bartay barnaamijkan, waxay dareemaan raaxo, gaar ahaan inay helaan wax kasta oo ay isticmaalaan maalin kasta.
Gimphoto. Isbeddel kale oo sidoo kale u oggolaanaya inuu la mid noqdo Photoshop. Kani wuxuu leeyahay nooc hadda jira, 2.4.
Xeebta. Kala -soociddan waxaa loogu talagalay Mac oo dhexdeeda waxaad ka heli doontaa waxyaabaha aasaasiga u ah Gimp, laakiin ma aha kuwa horumarsan.
CinePaint. Waxaa horey loogu yiqiin Filim Gimp waxayna u oggolaaneysaa 16 xabbadood oo qoto dheer kanaalka midabka in lagu daro barnaamijka. Waxay leedahay maareeye qaab dhismeed iyo kuwa kale oo ka fiican oo la xiriira farshaxanka shaneemada.
Hadda oo aad wax badan ka taqaan Gimp, waa waqtigii laga fikiri lahaa haddii uu yahay barnaamijka tafatirka sawirka ee aad raadinaysay. Faa'iidooyinkeeda badan ayaa awood kuu siin kara sidaas oo kale, laakiin waa inaad sidoo kale tixgelisaa khasaaraha. Maxay kula tahay? Miyaad doorataa Gimp ama miyaad doorbideysaa barnaamij kale oo tafatirka sawirrada?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Gimp » Waa maxay Gimp
Sida loo sameeyo kaararka ganacsiga ee Word
Indesign: maxaa loogu talagalay?